Masibuyiseleni isidima somlandu wama Afrika - Xhosa Culture
Home / Uncategorized / Masibuyiseleni isidima somlandu wama Afrika
Masibuyiseleni isidima somlandu wama Afrika
XhosaCulture June 2, 2014	Uncategorized 1,793 Views
MZI kaPhalo mandithathe elithuba ndinihlomlele kwizicamagushelo zesihlwele saseMhlab’uhlangene, nditsho ngaloo ndlela ndiyanibhotisa.
Inkqayi ingena ngentlontlo. Zonk’izinto ziqala ngomqondo. Ugwece lezimvo zokuthukuthel’ithala lelizwe lethu. Yiminyaka nje engamashumi amabini siyifumene inkululeko kwelilizwe. Phambi koko besisithi ubuzwe bethu sele bufana nobuthumbu obugululiweyo. Lonto ke yabangelwa kukutshikilelwa kwenkcubeko yethu ngaboo babesemagunyeni phantsi kolawulo lobandlululo. Nto leyo yathi yaqandusela ukujongelwa phantsi kwamasiko nezithethe zethu singamaAfrica. Xa kunamhlanje sithi izembe lololwa kokwalo, kuba kulemihla sibuyisa isidima somlandu nenkcubeko yethu.
Yenziwe intlabamkhosi yeviko lokuvuselela imveli nembali yethu ngoosaziwangani noozakuthi abatshotsha entla kwezenkcubeko. Namhlanje apha eMzantsi Afrika sithetha ngemanyano phakathi koluntu olunendidi ngeendidi zamasiko nezithethe. Thina nto zaziyo asothukanga lelonyathelo kuba kakade, nangona sisohluka ngamasiko nezitehthe zethu, zikhona ezona zinto zingundoqo ezisenza ukuba sibe yimbumba yamanyama. Phakathi kwezozinto endinokuzibala kukuba imbali yethu yokusintsibala phantsi kwedyokhwe yengcinezelo yasenza sangumfela ndawonye womafung’angajiki. Ngamxhelomnye sithi singamAfrika anelungelo nelunda ngobuAfrika bethu, kwaye sofunga simunce intupha sisithi ubuzwe bethu asinakubuvumela bubhange ngongengathi sigagelwe zidyasi satshelwa nazizicheku, uNotshe intombi yeLawu.
Ewe ke khona siyavuma ukuba uninzi lolutsha lwethu luthe swi iingqodo zizinto ezifuthelwa zimpembelelo zaseNtshona. Nalena into inezizathu eziyikhonondelayo kumaxesha esiphila kuwo. Ndingabala iinkqubo ngee nkqubo zikamabonakude nezithe gqolo ukuveza izinto ezinxamnye nenkcubeko yomnt’oNtsundu. Imigomo elolohlobo yenza okokuba ulutsha lwethu luzijonge ngamehlo anenkungu izinto ezoyamene nenkcubeko yethu, kuba becinga ukuba zizinto ezisemva.
Uyakukhumbula ukuba zonke iilwimi zentlanga ngee ntlanga zisemthethweni kuloRhulumente wesininzi, kodwa ufumanisa ukuba olona lwimi lusetyenziswayo lolwesilungu. Ifuna kwathina ke naleyo siyilungise, sizinxweme ekekhumsheni nokuba sidl’imbadu sisodwa.
Kumele into yokuba siyimele ngenyawo inyewu yamaziko osasazo angaziphuhlisiyo iilwimi zethu singabantu abantsundu. Masibathundeze bonke oombambo azilali into ingaziwa ukuba banike ithuba kubekho iinkqubo namahlelo akhankasela amasiko nezithethe zethu. Ayikusinceda eyokuba sithethe enye kwelinye icala sibe phofu kwelinye sizenza eyahlukileyo kule sithi sifuna yona.
Umzekeliso sithi masikhuthaze ababhali bayihlaziye ngokutsha imbali yethu. Lilo elo, kodwa lifuna umkhombandlela ocacileyo. Kulungile kona okokuba sithi abafundi mabafunde ngeelwimi zabo, Lonto yenza kubekho ungqameko nengqubo kwizinto esizokhele zona zegwiba lokubuyisa isidima, isithozela nesonti kwinkcubeko yethu. Kubabuhlungu kum ukuva oontangandini bam besoma behamba ngentloko ematyeni kodwa umntu kunzima nokuqingqa isivakalisi esinye ngolwimi lwesiXhosa. Zintloni ezingathethekiyo ezo, nezisenza into yokuba sithandabuzeke kwezinye izizwe. Umbhali owaziwayo waseKenya uNgugi uyibeka ngamazwi anobukrakra lendebe, ngelithi “masibenentloni noko ukuzingomba isifuba ngelwimi zasemzini, sibe singazazi ezo zomthanyama”.
Ndibuye ndize ngqo kumasiko ethu. Isiko lidala linenkqayi banyatheli. Lamasiko sithetha ngawo angummiselo wezinyanya nookhokho bethu. Siphila phezu kwengcambu ezincangathi ligazi lesihlwele sethu, nelenza okokuba sibenekhwele ngomlandu welilizwe. Yiyo lonto sisithi igazi liyajiya kunamanzi.
Umzi ngamnye unamasiko wawo nezithethe zawo, kwaye ubukhulu becala ukhona umyinge wokufana ngendlela esiwenza ngayo loo masiko. Ikhaya ngalinye linentlabi yalo, eyingotya kumnotho wekhaya elo unokokushiyana kwezindlu ezo zelo khaya. Usapho ngalunye lunomkhonto walo, wokusebenza zonke izinto zobulawu ezayamene nosapho olo. Umzi ungumzi ngeentlanti. Kukanti iintlanti zintlanti ngomgquba, mgquba lowo uyinqontsonga yomthonyama. Yonke into enesiko iqala ebuhlanti, iphinde iququnjelwe kwase buhlanti. Ndifun’ukuthi kuwe ke ubuhlanti yintsika yamasiko ethu, yiyo lonto usiva abantu abaninzi besithi ‘mna ndakhulela, ndaqiniswa emgqubeni’. Liyinyaniso emsulwa elo, kuba imbeleko le ithi yenzelwe usana, ithungelwa injobe phakathi ebehlanti. Ekuthungatheni nasekusebenzeni amasiko ethu sinenkolo yokokuba senze idini ngemvu okanye imbuzi, maxawambi ke sithi sicele intlabi yekhaya ithabathe umkhonto wosapho ihlabe idini elo. Ukuba idini lithe labhonga siye sithi ‘icamagu livumile’.
Amagqibela kankqoyi mandiwanabise ngoluhlobo, umntu akakwazi ukuwaphepha amasiko nezithethe zakhe. Walinga mazama oko, ingulo iyakuvelela, okanye uyakunukelwa kukufa. Xa kukho isiko elingenziwanga emzini ingxaki ziyagxalathelana, luphele uxolo. Mandigxinisise kuluntu lakuthi ngokuthi masiyiphakamisele phezulu inkcubeko yethu, kuba yiyo esenza sibengabantu abanyulu nabanoBuntu. Amasiko ke wona zintsika zethu zokubambelela, ezisikhumbuza apho sivela khona, ziphinde zisinike itorho lekamva lethu. Ukuba awuzazi apho uvela khona, awusayikuzazi apho uyakhona.
Mandiqwele ngelithi, ukususela namhlanje ndizakuphefumulelana nani kulentlanti ngemiba eyayamene nezinto zomlandu, inkcubeko, imbali, umbuso nazo zonke izinto ezidla umzi. Maz’enethole.
Previous Madiba the African Opera at the South African State Theatre
Next Yiyani makwedin’iyanikhwaz’i Silimela! by Xolisile Mari
The Coronation of AmaXhosa King, HM Zwelonke Sigcawu